Mpanamboatra stringer tsara indrindra sy orinasa |Gimarpol
Ny gaskets stringer dia tokony ho malefaka ary mipetaka eo amin'ny kofehy.Tsy maintsy amboarina amin'ny fitaovana polyethylene conductive izy ireo ary manana fanoherana elektrika <104 Ω.
Tsy tokony hampiroborobo ny fiforonan'ny volombava zinc ny firakotra ambonin'ny Clip-On sy Bolt-On stringers.Mila manendry ny haben'ny Stringer mba handraisana ny halalin'ny tontonana sy ny flange.
Ny rafitra ambanin'ny UPIN dia misy electrozinc na fitsaboana galvanization mafana.Safidy famolavolana isan-karazany ao anatin'izany ny ambany-profile, manara-penitra, adidy mavesatra, adidy mavesatra fanampiny manohitra ny seismic understructures dia hita ao amin'ny orinasa.
Code Product Stringer
Description C fantsona mangatsiaka galvanized stringer 21mmx30mmx575mm sy 1.0mmT.
Code Product Sokiro
Description Loha boribory 11mm dia.. Ny ampahany misy kofehy 6mm dia.x43mmL, visy vy amin'ny coating electro zinc.
UPIN dia naorina tamin'ny taona 2003. Ny orinasa dia ao amin'ny tanànan'i Changzhou, Faritanin'i Jiangsu, izay 150kms miala an'i Shanghai ary mankafy ny fampiononana.Mandrakotra velaran-tany 50.000sqm miaraka amin'ny mpiasa 300 mahery ny Upin.Mandray soa avy amin'ny famokarana matihanina sy ny fitantanana kalitao araka ny ISO9001: 2000, ny UPIN dia mivoatra amin'ny famokarana gorodona avo lenta ary manolo-tena hanome gorodona feno eran-tany.
Ny tontolon'ny calcium sulphate namboarin'i UpinFLOOR dia avy amin'ny vovon'ny sulphate calcium 100% sy ny pulp taratasy.Ny votoatin'ny vokatra vita amin'ny kalsioma suphate efa vita dia 90% farafahakeliny.UpinFLOOR vy simenitra tontonana vita entana recycled votoaty mahatratra 45% farafahakeliny.Mifandraisa amin'ny varotra UpinFLOOR raha mila fanazavana fanampiny.
teo aloha: cable grommet
Biraon'ny fanandratana pneumatika tokana Zt565
Vinyl ara-barotra Sarona ambonin'ny tany